साताको पहिलो दिन यति धेरैले बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? - ramechhapkhabar.com
साताको पहिलो दिन यति धेरैले बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
दक्षिण अफ्रिकाबाट कोरोना भाइरसनको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलन थालेपछि सुनको मूल्य फेरि उकालो लागेको छ । मंसिर २ गते प्रतितोला ९४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको सुनको मूल्य गत शुक्रबारसम्म घटेर ९१ हजार ९ सय रुपैयाँमा झरेको थियो ।
आइतबार एकै दिन तोलामा ८ सय रुपैयाँले सुन महँगिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि त्यसको असर परेको महासंघले जनाएको छ ।
चाँदीको मूल्य भने तोलामा १५ रुपैयाँ घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १२२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार १२१० मा कायम भएको छ ।
नेपाल पेमेन्ट सोलुसन्स्ले आफ्नो डिजिटल इकोसिस्टम बिस्तार गर्दै प्राईम बैंकसँग सहकार्यको लागि सम्झौता गरेको छ । नेपाल पेमेन्ट सोलुसन्स् प्रालिको तर्फबाट प्रताप श्रेष्ठ र अभय रिजाल तथा प्राईम बैंकको तर्फबाट नकुल पौडेल, शिव प्रकाश ढकालले आ–आफ्नो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल पेमेन्ट सोलुसन प्रालि एक भुक्तानी प्रणाली एग्रीगेटर हो जसले विशेष गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, पीएस्पीहरु, रेमिट्यान्स कम्पनीहरु र व्यवसायिक क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने गर्दछ । नेपाल पेमेन्ट सोलुसनले अधिकाशं “क” वर्ग, “ख” वर्ग र “ग” वर्गका बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी काम गरी रहेको छ ।